Home Siyaasadda Dhulkii danta guud ee Daraawiishta magaaladda Beletweyne oo laxaraashay
In muddo ah waxaa leysku heystay habkii loowajihi lahaa mareynta dhulka danta guud Daraawiishta ee magaaladda Beletweyne waanna dhul aad u baaxad weyn lanna qiyaasi karrin haddii laxaraasho lacagta ka soo xaroon karto waanna hanti ka dhexeyso shacab farra baddan oo halkaanne laggu soo Koobi karrin.
Radiohalgan wuxuu xog ku hellay in xaraash laggu billaabi rabo maalmaha foodda naggu soo haayo lanna diyaariyay Engineeraddii cabirri lahaa lagguna war geliyay ganacsato waaweyn in aay isku diyaariyaan kanna soo qeyb gallaan cabarka Lagga billaabi rabo Xeradda Daraawiishta bartamaha Magaalada Beletweyne.
Waxaa mashruucaan gacanta ku haayo maamulka Gobolka Hiiraan hurmuudna uu ka yahay Gudoomiyaha Gobolka Ali jeyte Osman waxaa laggu furri doonnaa halkii boos lacag dhan 35000 Oo Dollar waanna wareegga koobaad wareegga labaad waxaa lagga dhiggi doonnaa 45000 oo Dollar .
Sababta labadda wareeg loogga dhigay ayaa ah in cabsi jirto cabsidaas oo ah haddii aay kacaan Bulshadda ku nool magaaladda Beletweyne gabbi ahaan qalqal geli doonno xaraashka dhulka danta guud ee daraawiishta.
Haddii aay noqoto siddii larabay wareegga koobaad waxaa laggu helli doonnaa lacag raqiis ah halkii boos waanna tijaabo hirgashay wareegga labaad wuxuu noqon doonnaa mid qaali wax sababtoo ah tijaabaddii ayuu ka baxay oo waa laxalaaleystay hadafkii lagga lahaayna waa lagaaray oo waa hanti cidlo lagga hellay.
Radio halgan xogtaan waxaa soo gaarsiiyay dhalinyarro ka ag dhow maamulka Gobolka Hiiraan waanna dhalinyarto ka damqatay boobka laggu haayo dhaxalka Caruurta berito waxa kalle oo looxaqiijiyay Radio halgan in aay jiraan dad ganacsato ah oo hadda lagga sii hor marsaday lacago aad u baddan laggunna qiyaasay illaa 1.2 Million Dollar manna aha lacag yar.
Sideed u arragtaa boobka Danga guud .?
Previous articleDeni, ayaa maanta xarunta Wasaaradda Maaliyadda Puntland ku daah-furay shirka dib-u-eegista Dakhliga guud iyo Kor u qaadista wax soo saarka Dowladda Puntland.
Next articleCadaado: madaxwaynaha Galmudug K (Qoor-Qoor) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray cadaado
Wasiir Beyle Oo Looga Yeeray Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax xalay ka dhacay ...
Madaxda Midowga Yurub Oo U Muuqda Kuwa Ku Mideysan Ansixinta Codisga...